I-MakeWebBetter: Yakha futhi Ukhulise Ibhizinisi Lakho Le-ecommerce ngeWooCommerce neHubspot | Martech Zone
Akungabazeki ukufinyelela kude kwe- I-Hubspot njengeCRM nokumaketha okuzenzakalelayo platform kanye WordPress Njengohlelo Lokulawulwa Kokuqukethwe. Ngoba i-plugin elula nesengezo, WooCommerce ibilokhu ikhula ekuthandeni njengeplatifomu ye-ecommerce ezosetshenziswa kalula.
Ngenkathi i-WordPress ikhiphe i-CRM yayo, ipulatifomu ayinakho ukuvuthwa kwe- I-Hubspot ngokukwazi kwayo ukuqhubekisela phambili amasu okuthola nokugcina inhlangano. I-HubspotUkuhlanganiswa okungabizi kakhulu kokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende (i-CRM) kanye nokuzisebenzisela ukumaketha kwenza kube yinkundla enhle yokuqalisa enkampanini ethuthukisa izinqubo namasu ayo okumaketha kwangaphakathi.
Ngakolunye uhlangothi lwesibalo, I-HubspotI-CMS ayikhulile njenge-WordPress, futhi ayinikeli nganoma yiluphi uhlobo lwesixazululo se-ecommerce esiphathelene. Uma ibhizinisi lakho lifuna zonke izinzuzo ze-CRM, solution ye-ecommerce, kanye ne-automation yokumaketha… kuzofanele uhlanganise. Ngokujabulisayo, I-Hubspot futhi i-WordPress inezici zokuhlanganiswa okuqinile kanye nokwabelana okunjalo kwemakethe okusabalele ukuthi kunezixazululo ongakhetha kuzo ezikhohlisayo.
I-MakeWebBetter ingcono: I-Hubspot kanye ne-WooCommerce
Inkampani yami isiza ekusebenziseni nasekuhlanganiseni izixazululo… nomsebenzi wayo obizayo. Ukubonisana ngokuqasha nezinsizakusebenza zentuthuko kungabiza inkampani amakhulu ezinkulungwane zamaRandi - ingasaphathwa eyokugcinwa okuqhubekayo nezithuthukisi ezivame ukudingeka. Ngenxa yalokhu, into yokuqala esiyenzayo njengabaluleki ukubheka izixazululo ezikhiqizwayo esezivele zamukelwa futhi ezinedumela elihle.
I-MakeWebBetter ingcono ingenye yalezi zinkampani… hhayi nje iqembu labathuthukisi be-plugin, kepha i-ejensi esiza ukusebenzisa nokusebenza I-Hubspot namakhasimende we-WordPress. Futhi bayilungu leGolide le- I-Hubspot Isixazululo sozakwethu Uhlelo. Ngamanye amagama, banezinsizakusebenza zokuzinikela zokuqhubeka nokwenza ngcono, ukusungula, nokugcina izixazululo zabo.
Icacisiwe ku I-Hubspot futhi WooCommerce, ama-plugins abo neminikelo yesevisi yokuzikhethela izokusiza ukuhlanganisa imithombo yedatha emibili, udlulisele umsebenzi we-ecommerce I-Hubspot, nokwenza idatha ifinyeleleke ekuxhumaniseni okwenziwe ngokwezifiso, okuhlukanisiwe kwezentengiso ukusiza ukushayela ukuguqulwa kanye namathuba we-upsell.
Ungayihlanganisa kanjani I-Hubspot kanye ne-WooCommerce
IMakeWebBetter's I-Hubspot futhi ukuhlanganiswa kwe-WooCommerce kungatholakala ku- 5 izinyathelo ezibalulekile:
Xhuma inqola yakho yokuthenga ye-WooCommerce KuHubSpot
Nquma izinkambu zakho namaqembu wangokwezifiso ukuhlanganisa neHubSpot
Hlanganisa imikhondo yakho nge I-HubspotUhlu lwe-Smart List ne-recency, imvamisa, kanye nokuhlukaniswa kwemali (RFM).
Nika amandla ukuqhutshwa komsebenzi wokumaketha okwakhiwe ngaphambili kwe-ecommerce I-Hubspot ukushayela ukuguqulwa.
Yakha imibiko ukuze ubone ngeso lengqondo ukuthengisa kwakho nokukhula kwebhizinisi.
Ukuhamba komsebenzi wokukhangisa okwakhiwe kabusha kwe-Ecommerce kufaka:
Ukushiywa Kwenqola Yokulahlwa Kwezinqola Ezilahliwe - Kukusiza ukuthi uphinde uthole izinqola ezilahliwe futhi kuvumele amakhasimende akho aqedele ukuthenga kwawo ngochungechunge lwama-imeyili, enikeza amakhuphoni esaphulelo.
Uyemukelwa Amakhasimende Amasha & Thola Ukuhamba Kwendlela Yokuhamba Kwe-2 - Le imeyili ibangela ngemuva kokuthengwa kokuqala futhi yakhelwe ukunika amakhasimende akho okuqukethwe okuwusizo okubajabulisayo.
Dizayina ukuhamba kwe-MQL Workflow - Lokhu kuhamba komsebenzi kuzokusiza ukondle umkhondo ofanelekayo wokumaketha (MQLs) wesitolo sakho. Igxila ekuguqulweni okuholela kumakhasimende. Lokhu kuhamba komsebenzi kuzodala ngokuzenzakalela uchungechunge lwama-imeyili oluzenzakalelayo futhi luwathumele kuma-MQL ngesikhathi esifanele.
Ukubalwa kwe-ROI - Lokhu kuhamba komsebenzi kuzosiza ekubaleni i-Return On Investment (i-ROI) yemikhankaso ehlukile yokukhangisa efana ne-MQL Nurturing, Welcome New Customer ne-Get 2nd Order njalonjalo.
Landela uNurture - Kakhulu, akunakwa. noma kunjalo, okubaluleke kakhulu. Ukuhamba komsebenzi okugxile kancane okudizayinelwe ukukugcina uxhumekile namakhasimende akho kulo lonke uhambo lwamakhasimende. Uchungechunge lwama-imeyili okulandelela anolwazi olukhethekile, amadili, njll. Nokunye okuningi.
I-MakeWebBetter ingcono I-Hubspot nama-plugins we-WooCommerce WordPress
IHubpot WooCommerce Integration Pro - isisombululo esinamandla sokuthengisa nokumaketha, esisiza abathengisi be-eCommerce ukuguqula imikhondo ibe ngamakhasimende. Yisixazululo sesoftware esilungele ukusetshenziswa esingahlanganisa iWooCommerce (ipulatifomu ehamba phambili ye-e-commerce emakethe ehlanganisa ama-30% awo wonke amawebhusayithi) neHubSpot. I-HubSpot iyithuluzi lokumaketha elizenzekelayo eliphelele leWooCommerce.
Qalisa nge I-Hubspot kanye ne-WooCommerce Integration
Umsebenzisi we-Hubspot Sync WordPress - Yenza inqubo yokuvumelanisa yonke imininingwane yakho yamakhasimende ku-HubSpot yokufinyelela ngokushesha nenqubo yokwenza izinqumo esebenza kahle. Ngokuvumelanisa Kwenkambu Nensimu kweHubSpot, ungabeka kalula imephu yezindawo zokuxhumana zeHubSpot nezinkambu zabasebenzisi beWordPress.
IHubpot WooCommerce Ukubuyiselwa Kwenqola Yokuthenga Engasasebenzi - buyisa ukuthengiswa okushiywe kwesitolo sakho se-WooCommerce ngokuthumela izikhumbuzo ze-imeyili ezenzakalelayo kumakhasimende akho, ashiye isitolo sakho ngaphandle kokuqedela ukuthenga.
I-HubSpot Thola Isilinganiso - Isixazululo sokumaketha konke esikunikeza isikhala esisodwa ukuze uxhumane nemikhombandlela yakho engaba namandla, uphathe izicelo zakho zesilinganiso bese uziguqula zibe ukuthengisa, zisuka ku-HubSpot CRM yakho (i-CRM enamandla kakhulu) futhi futhi, usethe ukulandelela kwayo indawo.
Iziphesheli zeHubSpot zobulungu beWooCommerce - ikuvumela ukuba uhlele amalungu esayithi lakho njengoba iHubSpot isebenza ngamazinga afanelekile wesivumelwano, amapulani kanye nezinsuku zokuvula nokuvala.
Idili leHubSpot Ngomsebenzisi ngamunye - ivumela abasebenzisi ukuthi baguqule ukuthengiswa okungaba khona kube ngamadili weHubSpot ngesiteji esifanele sokuthengiselana, ukuhamba komsebenzi okuzenzakalelayo, inani, kanye nosuku lokuvalaQapha ukubalwa komkhiqizo wakho, ukuthengisa kanye nemali engenayo nge-E-commerce Pipeline kanye ne-WooCommerce Sales Pipeline ku-E-commerce Insights Dashboard esanda kuklanywa
IHubSpot Dynamic Coupon Code Generation - Isixazululo esi-smart in-one esikhiqiza ngokuzenzakalela amakhodi amakhuphoni we-Digital ahlenga kanye kuphela, ngokususelwa kuzilinganiso zamanje zamakhasimende akho zeHubSpot RFM.
Bheka Yonke Imikhiqizo Nemisebenzi ye-MakeWebBetter
Tags: inqola yokuthenga elahliweishiye i-imeyili yenqola yokuthengaCRMezokuhweba ngekhompuyutha ezishintshayoimvamisaindawoIHubSpot CRMmakewebukumaketha imikhondo efanelekileezezimalimqlukondla kuholelaukukhulisa ukuhamba komsebenziukuzenzelarecencyimali yemvamisa ye-recencyI-rfmukuhlukaniswa kwe-rfmRIOukuhamba komsebenzi we-roiukuqhutshwa komsebenzi kwe-oda lesibiliukwahlukanisaukuhlanganiswa kwenqola yokuthengauhlu oluhlakaniphileukwamukela i-imeyiliWooCommerceWordPressplugin wordpress